Android, iOS နဲ့ Web တွေမှာ Google က ခြေရာမခံနိုင်အောင် ဘယ်လိုပိတ်မလဲ?? – DigitalTimes
Privacy ကိုအရမ်းစိုးရိမ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက် Google က “turning off location history” ဆိုတာလေး ရွေးလို့ရအောင်အမြဲတမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်သွားသမျှနေရာတွေကို Google ကခြေရာမခံနိုင်အောင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က location sharing ကိုပိတ်ထားချိန်မှာ Google က တည်နေရာတွေ ခြေရာမခံနိုင်ပေမယ့် တခြား Google apps တွေက အချိန်နဲ့တည်နေရာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဒေတာတွေကို default အနေနဲ့ သိမ်းထားပါတယ်။ အဲတာကြောင့်ပဲ အဲဒီ App တွေကိုဖွင့်လိုက်ရင် ကိုယ်သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဒေတာတွေပေါ်ပေါ်လာတာ မဆန်းပါဘူး။
ကြော်ငြာတွေက ဒါကိုအသုံးချပြီး မျက်စိနောက်မှာကြောက်တဲ့သူတွေအတွက် “location tracking” ကို လုံးဝကိုပိတ်ပစ်လိုက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ အောက်မှာအဆင့်လိုက်လေးတွေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ကိုယ့်တည်နေရာကိုခြေရာခံနေတာကို ရပ်နိုင်ဖို့ location history ပိတ်တာအပြင် “Web & App Activity” setting ကိုလည်း disable လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ location ဒေတာမှန်သမျှကို Google က ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Disable “Web & App Activity” on the Web
၁. Browser မှာ Google အကောင့်ကိုဝင်ပါ။ (ဒီလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ) ပြီးရင်’Privacy info and privacy’ option ကိုနှိပ်ပါ။
၂. “Go to My Activity” ကိုသွားပြီး Google က ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေသိမ်းထားလဲ ဘယ်ဒေတာတွေကို control လုပ်ထားလဲကြည့်ပါ။
၃. ဘယ်ဘက်က Navigation menu ကနေ “Activity Controls” ကိုသွားပါ။
၄. “Activity Controls” page မှာ အပြာရောင် “Web & App Activity” လေးကို toggle off လိုက်ပါ။
၅. ပိတ်လိုက်ရင်တော့ Google ကနေ location data တွေဖျက်ပစ်ဖို့ ရှည်လျားတဲ့ Warning စာတွေကို Pop0Up အနေနဲ့ ပြလာပါလိမ့်မယ်။
၁. Android မှာတော့ Setting > Google> Google Account ကိုသွားပါ။
၂. “Data & Personalization” ကိုသွားပြီး “Web & App Activity” option ကို ပိတ်လိုက်ပါ၊ စာအရှည်ကြီးနဲ့ Warning ပေါ်လာရင် “Pause” ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
၁. iOS မှာတော့ setting ကနေ app တစ်ခုချင်းစီကိုသွားပြီး location Setting ကို ပြောင်းပေးရပါမယ်။
ဒီလို “While Using the App” ကိုရွေးလိုက်တာက app ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှ location ဒေတာကိုရမှာဖြစ်ပေမယ့် Background မှာ ဒေတာကိုပေးပို့နေတဲ့အတွက် Google Server ပေါ်မှာ တည်နေရာဒေတာတွေက ရောက်နေမှာပါပဲ။ ဒါကိုလုံးဝပိတ်ချင်ရင်တော့ “Never” ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် Google Maps တွေဘာညာတွေလုံးဝသုံးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Location Tag ထားတဲ့ဒေတာတွေကို ဖျက်ပစ်ချင်ရင်??
၁. “My Activity” Setting ကို ဒီလင့်ခ်ကနေဝင်ပါ။
၂. location pin လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် pop-up window လေးပေါ်လာပြီး အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
၃. ညာဘက်ထောင့်က Menu လေးကိုနှိပ်ပြီး “Delete” လုပ်လိုက်ပါ။
တကယ်တော့ Google အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာတွေအများကြီးကို ရယူနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်က ဒေတာတွေကို မ share ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ပိတ်ဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ကိုယ်က Privacy ကို အရမ်းကြီး Sensitive ဖြစ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ Google ရဲ့ Service တွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရမှာပါ။ အရမ်းစိုးရိမ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ရှိသမျှတွေ လိုက်ပိတ်ရတဲ့အခါ ခုနကလို ဘာမှကောင်းကောင်းသုံးလို့မရဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမြင်မတူနိုင်တဲ့အတွက်… Let’s meet in comments!!! 😉
Tags: Google, Location Tracking, Tech Tips
Sony က Android 9.0 Pie ရရှိမယ့် စမတ်ဖုန်း စာရင်းကို ကြေညာ
Google က ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ Smart Display ကို မိတ်ဆက်မည်